तरङ्गको सातौँ सिर्जनशील साहित्य शिविर अर्गलीमा सम्पन्न
पाल्पा, २० वैशाख – तरङ्ग साहित्यिक संगम मदनपोखराले आयोजना गरेको २ दिने सिर्जनशील साहित्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
रुरुक्षेत्र रिडी र अर्गलीमा आयोजित शिविरमा लुम्बिनी अञ्चलका ५० जना साहित्यकार, लेखक र पत्रकारहरुको भाग लिएका छन् । शिविरपछि अर्गलीको देउरालीमा आयोजित रचना वाचन कार्यक्रमा ४५ जना कवि कवयत्री र स्रष्टाहरूले राष्ट्र भावना प्रकृति प्रेम, वेरोजगारी समस्या, विकासप्रतिको जनताको चाहनालाई केन्द्रविन्दु बनाइ रचना गरेका सिर्जना पाठ गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि साहित्यकार प्रा.डा. कपिलदेव लामिछानेले सिर्जना शिविरमा रचना गरिएका कविताहरु राष्ट्रियस्तरका रचना भएको बताउनुभयो । उहाँेले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विशेषता उजागर गर्ने गरी आएका रचनाहरुको संकलन गरी प्रकाशमा ल्याउन सके अर्गली रुरुक्षेत्रको प्रचार प्रसार हुने बताउनुभयो । समीक्षक तथा साहित्यकार दामोदर ढकालले स्रष्टाहरुलाई स्थलगत अवलोकन गराई रचना गर्न प्रेरित गर्नु र स्थानीय समुदायकै बिचमा सुनाउने कार्यले नेपाली साहित्यको विकासमा तरङ्गको योगदान महत्वपूर्ण रहको देखिनेछ भन्नुभयो । कार्यक्रममा साहित्यकारहरु शंकर प्रसाद नेपाल, रुद्र ज्ञवाली, टंक पन्थ, होमनाथ शर्मा, रमेश समर्थन, राजेन्द्र गोपाल सिंह, नारायण अधिकारी, बिजया पन्थ, दुर्गादत्त रेग्मी, युवराज पौड्याल, कृष्ण बस्याल, गोपाल प्रसाद बस्याल, शंकर गैरे, लक्ष्मण देवकोटा, मिलन समिरलगायतले अर्गलीका पौरखी किसानको मेहनत, सेनकालीन हृषिकेश मन्दिर र राजकुलो, और्व आश्रम र रिडी अर्गलीको भविष्यका बारेमा रचेका कविता, गजल बाचन गर्नुभयो । कार्यक्रममा अर्गली गाउँ विकास समितिका सचिव शंकर पाण्डे, गाउँ विकास समितिका निर्वतमान अध्यक्ष पर्शुराम भट्टराई, समाजसेवी कमल रानालगायतले स्रष्टाहरुलाई धन्यवाद दिनुभयो । गाउँमा आएको अवसरमा साहित्यकारहरुलाई अर्गलीका देउरालीमा जनताले फूल मालाले भव्य स्वागत गरेका थिए । साहित्यिक र सांस्कृतिक माहौलमा चलेको कार्यक्रम हेर्न र सुन्न करिव ५ सय स्थानीय महिला र पुरुषको उपस्थिति रहेको थियो । तरङ्ग साहित्यिक संगमका उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारीको स्वागत, राजेशकुमार अर्यालको सञ्चालन र अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्माको अध्यक्षतामा कार्यक्रम चलेको थियो । स्मरणरहोस्, तरङ्ग साहित्यिक सङ्गम मदनपोखराले केही वर्षयता पाल्पा र छिमेकी जिल्लाहरूको सेरोफेरोमय स्रष्टाहरूलाई विचरण गराएर स्थानीय प्रकृति, समाज, संस्कृति, जनताका समस्या अवस्था आदिको उत्खनन गराउने कार्य गर्दै आएको छ । सिर्जनशील साहित्य सिविर तरङ्ग साहित्य सङ्गमको अभिन्न पाटो जस्तै बनिसकेको छ । यसअघि छवटा साहित्य शिविर चलाएको सङ्गमले स्रष्टाहरूलाई मदनपोखरा, कौडेलेक, मस्याम मरामकोट, ताहुँ रम्भापानी, आलमदेवी रानीमहल, रिङ्नेरह पूर्वखोलाको भ्रमण गराइसकेको छ । यस पटक वैशाख अठार र उन्नाइस गते तरङ्गकै आयोजनामा रूरू–अर्गली साहित्य शिविर सम्पन्न भएको हो ।	साहित्यकार ज्ञवालीद्वारा समय स्पर्शको विमोचन
पाल्पा, माघ २५– कवि टंक पन्थद्वारा लिखित ‘समय स्पर्श’ कविता संग्रहको प्रगतिशील साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ प्रदीप ज्ञवालीले विमोचन गर्नुभएको छ ।
धवल पुस्तकालय प्रकाशक रहेको समय स्पर्श कविता संग्रहको विमोचन गर्दै ज्ञवालीले काठमाडौँबाहिर मोफसलमा क्षमतावान स्रष्टा छन् भन्ने उदाहरण टंक पन्थको यो कृति रहेको बताउनुभयो । काठमाडौँमा सिसा पनि मणि, पित्तल पनि सुन जस्तै बनाइने गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले पन्थका कविता सुन्दर र लालित्यपूर्ण रहेका छन् भन्नुभयो । एमाले केन्द्रीय सचिव समेत रहनुभएका ज्ञवालीले पहिचानका नाममा राष्ट्रिय एकता, बहुलता, विविधता र सामाजिक सद्भाव खलबलिएको अवस्थालाई स्रष्टाले लेखनको विषयवस्तु बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली भाषा भनेको देवनागिरी लिपीलाई मात्र बुझ्न नहुने भन्दै उहाँले भाषा, संस्कृतिको बहुलतालाई पनि साहित्यकारहरुले सम्मान गर्नु पर्छ भन्नुभयो । विद्वान नीलकण्ठ न्यौपानलेले प्रगतीशील विचार, राष्ट्रवादी चिन्तन र सामाजिक यथार्थलाई कविले कवितामा मुखरित गरेको बताउनुभयो । भावुक छन्दवादी कविका रुपमा परिचित पन्थले राष्ट्रवादी धारलाई समातेको धारणा समिक्षक न्यौपानेले व्यक्त गर्नुभयो । समीक्षक तथा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक शंकर गैरेले युगचेतनाको ऐतिहासिक विम्वका रुपमा यो कविता संग्रह आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा डा. एकनारायण पौड्यालले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको शब्द संयोजन र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको राष्ट्र भावलाई कविले सुन्दर ढंगले संयोजन गर्न सफल रहेको बताउनुभयो । २०६२ सालदेखि ०७२ सालसम्मको अवधिमा लेखिएका विभिन्न छन्दका ६२ वटा कविता यो कृतिमा समावेश छन् । कार्यक्रममा दीपशिखा पन्थ, रीता ज्ञवाली, कृष्णकला भण्डारी, भावना खनाल, ऋषिकेशव कडेंललगायतले रचना बाचन गर्नुभयो । कार्यक्रम पुस्तकालयका कोषाध्यक्ष सन्तोष खनालको स्वागत, महासचिव राजेशकुमार अर्यालको सञ्चालन र अध्यक्ष युवराज पौड्यालको अध्यक्षतामा चलेको थियो ।	झपेन्द्र जीसीको बालगीत कविता संग्रह विमोचन
पाल्पा, बैशाख ९ – पाल्पाली साहित्यकार झपेन्द्र जीसीद्वारा लिखित आजका कोपिला भोलिका फुल बालगीत कविता संग्रह आज धवल पुस्तकालय तानसेनमा बिमोचन भएको छ ।
पाल्पाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रेमनाथ पौडेलले कृतिको विमोचन गर्दै यति सन्देशमूलक बालगीत कविता शिक्षा क्षेत्रले प्राप्त गर्नु ठूलो सौभाग्य भएको बताउनुभयो । इतिहास पढाउन जीतगढी, भूगोल पढाउन नेपाल कहाँ छ ? सामाजिक पढाउन मौरी कविता, विज्ञानमा न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण भन्ने कविता रहेको र यो स्थानीय पाठ्यक्रम प्रवोधिकरणका लागि उत्तम कृति रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कृतिको समीक्षा गर्दै साहित्यकार डा. मुरारी पराजुलीले बालसाहित्यमा यति सचेततापूर्वक लेखिएका गीत कविता कमै मात्रामा रहेको र यसले बालसाहित्यमा राम्रो स्थान पाउने बताउनुभयो । ‘बालबालिकालाई जीवनप्रति प्रेम र संघर्ष गर्न सिकाउने कविता छन्, जुन समाज बदल्न लेखिएका छन् ।’ साहित्यकार पराजुलीको कथन थियो । समीक्षक साहित्यकार टंक पन्थले स्थानीय विषयवस्तुलाई बाल जिज्ञासा र बाल मनोविज्ञानका आधारमा अवतरण गराउन सक्नु लेखकको सफलता हो भन्नुभयो ।
लेखक झपेन्द्र जीसीले सत्य र साँचो कुरा बोल्ने बालबालिकाबाट आफूले यो कृति लेख्न प्रेरणा पाएको बताउनुभयो । उहाँले ठूला मान्छेले बटारेर बोल्छन् तर बालबालिका साँचो बोल्दछन् भन्नुभयो । कार्यक्रममा तरङ्ग साहित्यिक संगम मदनपोखराका अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा, पोखराथोक साहित्य संगमका अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्मा, कला विमर्श केन्द्रका अध्यक्ष डा. नेत्र न्यौपाने, वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मालगायतले कृतिको समीक्षा गर्दै लेखकलाई बधाई र शुभकामना दिनुभयो । कार्यक्रम धवल पुस्तकालयका महासचिव राजेशकुमार अर्यालको सञ्चालन र अध्यक्ष युवराज पौड्यालको अध्यक्षतामा चलेको थियो ।
माइलस्टोन प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेड प्रकाशक रहेको कृतिको मोल १ सय २५ रुपैँया रहेको छ । रंगीन तस्वीरसहितका गीत कविता रहेको कितावमा २८ वटा कविता रहेका छन् । लेखक जीसीको यो सातौँ कृति हो ।	बादशाहको नयाँ पोसाक लोकार्पण
बुटवल, चैत्र ३– प्रगतिशील लेखक झपेन्द्र जीसीद्वारा लिखित बादशाहको नयाँ पोसाक नामक कृतिको आज लोकार्पण गरिएको छ ।
बुटवलको बुक्स प्लाजमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि साहित्यकार ऋषिराम भुसालले पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको हो । उहाँले सवाई ढाँचामा जीसीद्वारा लेखिएको खण्डकाव्य एक उत्कृष्ट कृति हो भन्नुभयो । आफ्नो नीतिलाई आत्मसाथ गर्न र समय चिन्न नसक्दा बादशाहले निर्वस्त्र हुनुपरेको इतिहास कोट्याउँदै साहित्यकार भुसालले छोटे बादशाहका प्रवृति पार्टीमा देखिएको बताउनुभयो । माक्र्सवादी साहित्यकार गोपिरमण उपाध्यायले तीन देशमा तीन सय वर्षको अवधिमा घटेका अलगअलग घटनालाई जोडिएको यो एक सुन्दर कृति आएको बताउनुभयो । कृतिको समीक्षा गर्दै साहित्यकार डा. मुरारी पराजुलीले निष्ठावान राजनीतिक व्यक्तिले लेखेको यस कृतिले सफलता पाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परिर्माजनका निम्ति निकै खटेकाले यो स्तरीय पुस्त कबनेको छ भन्नुभयो । साहित्यकार पराजुलीले परिवर्तित संस्करणमा आएका राजनीतिक बादशाहको खल्तीमा अनिवार्य हुनुपर्ने कृति रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षक राजेश श्रेष्ठले साना बालबालिकाले ठूला मान्छेलाई सुनाउँदा आनन्द आउने बनेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । लेखक जीसीले नाङ्गै भैसक्दा पनि सवस्त्र छु भनेर अभिनय गर्नु बादशाहको दम्भलाई आफूले कृतिमा उजागर गरेको बताउनुभयो । उहाँले बालबच्चाले ढाँटछल गर्दैनन् साँचो कुरा बोल्छन् भन्ने दृष्टान्तका रुपमा आफूले यो सवाई खण्डकाव्यमा बालबालिकालाई बोलाएको जानकारी दिनुभयो । दलबहादुर गुरुङ्गले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्र प्रकाशक सरस्वती पुस्तक पसलका प्रोपराइटर हेमानन्द शर्माको अध्यक्षतामा चलेको थियो । खण्डकाव्यमा डेनमार्कका साहित्यकार हान्स क्रिश्चियन एण्डरसनको बादशाहको नयाँ पोसाक, चीनका ये शङ् थाओ सम्राटको नयाँ लुगा र नेपालको राजतन्त्र अन्त्यको घटनालाई केन्द्रमा राखेर काव्य रचना गरिएको छ । बादशाहको नयाँ पोसाकका कथावस्तुलाई एकत्र पारी नयाँ लुगा लगाउन चाहने बादशाहकै कारण नेपालको राजतन्त्र पतन हुन पुगेको संकेत लेखकले यो कृतिमा गर्नुभएको छ । खण्डकाव्यमा तीन खण्ड र ५४ श्लोक रहेका छन् । सरस्वती पुस्तक पसल प्रकाशक रहेको ४२ पेजको यो पुस्तकको मूल्य ३५ रुपैँया रहेको छ ।	पूर्वखोलामा सिर्जनशील साहित्य शिविर
पाल्पा, माघ २३– तरङ्ग साहित्यिक संगम मदनपोखरा पाल्पाले आयोजना गरेको दुई दिने सिर्जनशील साहित्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
माघ २१ गते मंगलबार पाल्पाको रिङ्नेरह पूर्वखोला पुगेका स्रष्टाहरूले अवलोकन र स्थानीय समुदायसँग अन्तक्र्रियापछि फाँटमा बसेर साहित्य रचना गरेका छन् । संगमले यात्रा, अवलोकन र अन्तक्र्रियापछि स्थलगत साहित्य रचना कार्यक्रमलाई सिर्जनशील साहित्य शिविरको संज्ञा दिएको छ । पाल्पा, रुपन्देही र गुल्मीका स्रष्टाहरू सहभागी शिविरमा राष्ट्रप्रेम, जीवनदर्शन, प्रकृति, मायाप्रेम र समसायिक परिस्थितिलाई विषयवस्तु बनाएका कविता, मुक्तक, हाइकु र गजलहरू लेखिएका छन् ।
इश्वरीप्रसाद आचार्यले स्थापना गरेको उद्वुद्ध कलेजमा आयोजिक रचना वाचन कार्यक्रममा साहित्यकारहरू राधाकृष्ण शर्मा, कृष्णप्रसाद कोइराला, होमनाथ शर्मा, टंक पन्थ, कमल खत्री, सरोज काफ्ले, पुर्षोत्तम अर्याल, ठाकुरचन्द्र शर्मा, विमल घिमिरेलगायतले छन्दोवद्ध कविता वाचन गरेका छन् । स्रष्टा नारायणप्रसाद अधिकारी, गंगानाथ कोइराला, युवराज पौड्याल, गोविन्द भट्टराई, गुणाकर भुसाल, सुशिल न्यौपाने, राजेन्द्र गोपाल सिंह, झपेन्द्र खनाल, प्रेम खराल, सरस्वती सुवेदी, सविना देवकोटा, ज्ञानु न्यौपानेलगायतले गद्य कविता सुनाएका थिए । फणिन्द्र बस्यालले व्यङ्ग विनोद कविता गाए भने किशोर खनालले मुक्तक तथा हाइकु सुनाए । अठार पुराण वाचक नीलकण्ठ न्यौपानेले पूर्वखोला चिनारी शिर्षकको पद्य कविता वाचन गरेका थिए । पं. जीवनाथ न्यौपाने २००७ सालमा भूमिगत रुपमा आएका इश्वरीप्रसाद आचार्यले जनतालाई शिक्षा र श्रमको मूल्य बुझाउन सफल भएकाले यहाँका जनतामा स्वाभिमानीपन रहेको बताए । उनले आचार्यका केही क्रान्तिकारी कविताहरू सुनाएका थिए ।
यात्राकै क्रममा संगमले स्वयम् कर्ता र व्यास बनेर अठार पुराण वाचन तथा व्याख्यान गर्ने आचार्य पं. नीलकण्ठ न्यौपानेलाई ऐतिहासिक र अद्वितीय कार्य सम्पन्न गरेकोमा यज्ञस्थलमै पुगेर अभिनन्दन गरेको छ । जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति प्रेमनाथ बस्याल, वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मा र संगमका अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्माले दोसल्ला, पाल्पाली ढाकाटोपी, गलबन्दीलगाई अभिनन्दनपत्र प्रदान गरेका थिए । न्यौपानेले त्रिवर्षीय गुरुयोजनाअन्तर्गत ५ लाख श्लोक रहेको अठारै पुराण वाचन तथा कथा प्रवचन गर्नुभएको थियो । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक सूर्यबहादुर जीसीले आफू शिविरमा पहिलो पटक सहभागी बनेको र कविहरू जनताकै घरदैलोमा पुगेर रचना गरी वाचन गर्नु प्रशसंनीय कार्य हो भने । उनले थपे, ‘जनताको दुःख, सुख, भोगाई, गराईलाई नजिकबाट नियालेर स्रष्टाले हृदयको गहिराईबाट प्रस्तुत गर्दा भावुक बनाउने रहेछ ।’ कार्यक्रम संगमका सचिव रामप्रसाद अर्यालको सञ्चालन तथा अध्यक्ष राधाकृष्ण शर्माको अध्यक्षतामा चलेको थियो ।
तरङ्ग साहित्यिक संगम मदनपोखराले प्रत्येक वर्ष यस्तो साहित्य शिविर आयोजना गर्दै आएको छ । कवि, कवयत्री, लेखक, कलाकारहरुलाई सामूहिक रुपमा विभिन्न स्थानको अवलोकन तथा स्थानीय समुदायसँग भेटघाट गराई साहित्य रचना गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको तरङ्ग साहित्य संगमका सदस्य तथा शिविरका संयोजक राजेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो । संगमले यसअघि मदनपोखरा घिमिरेडाँडा, कौडेलेक, मस्याम मरामकोट, रम्भापानी ताहूँ, आलमदेवि रानीघाटमा यस्तो शिविर आयोजना गरिसकेको छ ।	More Articles...
धवलमा पाल्पा कक्षको आरम्भ
पाल्पामा लेखक तथा साहित्यकार सम्मानित
छचल्किएका तरङ्गहरुको बिमोचन
मोति जयन्तिमा दमकडामा कवि गोष्ठी
1234»End	सारेम विशेष	सारेमले अठारौँ वार्षिकोत्सव...पाल्पा, चैत्र २३ – सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाले अठारौँ वार्षिकोत्सव तीन दिवसीय कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुख अतिथि...राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका लागि साझा...पाल्पा, चैत्र २२– सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाले आयोजना गरेको राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा युवाको भूमिका विषयक गोलमेच कार्यक्रम ९ बुँदे घोषणापत्र जारी...संस्कृति र परम्परालाई युग सापेक्ष...पाल्पा, चैत्र २१– सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाले आयोजना गरेको संस्कृति, संस्कार र शास्त्र विषयक अन्तक्र्रिया ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको...सामुदायिक रेडियो मदनपोखराकाे छैटौँ...पाल्पा, भाद्र ५ – सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको दशौँ साधारण सभा तथा छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले झपेन्द्र जीसीको अध्यक्षतामा नयाँ...सारेमको सत्रौँ शुभजन्मोत्सव...